NayPyiTaw Expo and Car Show- 2012 ဖွင့်ပွဲနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » NayPyiTaw Expo and Car Show- 2012 ဖွင့်ပွဲနေ့
NayPyiTaw Expo and Car Show- 2012 ဖွင့်ပွဲနေ့
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 12, 2012 in Business & Economics, Events/Fundraise | 30 comments
12-12-12 NayPyiTaw Expo & Car Show မိုးကြိုးပွတ်စေ့ Expo
ဒီပွဲကို အားခဲထားတာ ကြာတော့ကြာပြီ။
သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ကြော်ငြာတွေဖတ်နေရကတည်းကပဲ။
ဟုတ်တယ်လေ.. အလွန်ထူးခြားတဲ့ ၁၂-၁၂-၁၂ ရက်နေ့ က စလို့ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၇၀၀ ကျော်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ ထူးကဲစွာ ကျင်းပမယ်ဆိုထားတယ် မလား။
နေပြည်တော်လို့ နာမည်ကြီးသာပေးထားတယ် ဒီလို ခမ်းနားတဲ့ အိတ်စပို ပွဲကြီးမျိုးက တစ်နှစ်တစ်ခါ ရှိချင်မှ ရှိတာကလား။
ကျုပ်လည်း စနစ်တွေပြောင်းပြီး ကားဈေးတွေ ကျနေပြီ ကျနေပြီ ဆိုကတည်းက ကားရူး ရူးနေတာလေ။ ရန်ကုန်၊ မန်းလေး မြို့ကြီးတွေမှာ ကားပြပွဲတွေလုပ်သွားတာ သတင်းတွေကြားပြီး လူမှာ မရိုးမရွ။ ဆယ်လီဗျစ်တီဒေါ့ကွန်းတို့ မောင်စေတန်တို့မှာ တတ်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီးတော့ပဲ သရေကျနေခဲ့ရတာ။ (ကားရောင်စုံတွေက ဓာတ်ပုံစားလှတာကိုး) ရှလွတ် ပြောရင်းက သရေ ကျလာပြန်ဘီ။
ဟုတ်တယ်လေ။ မော်ဒယ်စုံ ဘလင်းစုံ (ကီရာ၊ တိုယိုတာ စသဖြင့်ပြောပါတယ်).. အကြီး အသေး ဆိုဒ်စုံ (ဆလွန်း၊ ဘတ်စ် တို့ကိုဆိုလိုတာပါ) ဟိုက်ရှားဘားရတာကလား။
နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ အိတ်စပိုပွဲကြီးလည်းဖြစ်ပြန် ၁၂.၁၂.၁၂ နေ့ထူးလည်း ဖြစ်ပြန်တော့ကာ အမှတ်တရအနေနဲ့ ရွာထဲမှာ ပို့စ်တင်ရအောင် စီဂျေလုပ်လိုက်အုံးမယ်ဟေ့လို့ ကင်မလာလေးဆွဲပြီး ရုံးဆင်းခါနီး လစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပုံ(၁) ပြပွဲကွင်း မုဒ်ဦး
ဈေးပွဲတော်ကြီးလုပ်နေတဲ့ ကွင်းနားအရောက်မှာ လမ်းဘေးတစ်လျှောက် ကြော်ငြာဘုတ်ကြီးတွေ တန်းစီလို့၊ ကွင်းထဲကနေ မိုးပျံပူပေါင်းကြီးတွေ ထိုးတတ်ကာ အ၀င်ဝမှာလည်း နေပြည်တော် ဈေးပွဲတော်နှင့် ကားပြပွဲလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ မုဒ်ဦးကြီး လုပ်ထားပါတယ်..။ မုဒ်ဦးကို ဖြတ်၊ စီးတော်ယာဉ်ဆိုင်ကယ်လေးကို သတ်မှတ်နေရာမှာ ရပ်တော့.. အပ်ခ..ငါးရာတဲ့။ (မသကာ နှစ်ရာပေါ့ဗျာ) စိတ်ထဲမှာ နင့်ခနဲ ဖြစ်သွားပေမယ်လို့ ငါ အားခဲထားတဲ့ ပြပွဲကြီး၊ အစုံအစေ့ (ကား အမျိုးအစားစုံ၊ ဈေးနှုန်းတွေအကုန် ထောင့်စေ့အောင်) ကြည့်ရ မြင်ရမှာ ငါးရာတော့ ပေးလိုက်ပါမယ်ရယ်လို့ ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
ပုံ(၂) ပွဲတော်ကွင်းထဲ အ၀င်
ကားပြပွဲကွင်းထဲကို ရောက်တော့ ထင်ထားသလောက် လူတွေ ရုတ်ရုတ်အုပ်အုပ် မရှိလှဘူး။ အဲလေ နေကလည်းပူနေသေးတာကိုး။ ရွှေပွဲလာသူတွေ ဘယ်ကားက ဘယ်လိုကောင်းပြီး ဘယ်လောက်ဈေးရှိတယ်ဆိုတာတွေ ဆိုင်ထဲ အရိပ်ထဲ မေးမြန်းစုံစမ်းနေကြမှာပေါ့။ ရွာထဲက ကပေတို့ ကိုအံဇာတို့လို တချို့လည်း အချောအလှလေးတွေနား ကားကြည့်သလိုလိုနဲ့ ချောင်းနေကြမှာပေါ့။ ကျုပ်လည်း အင်တာနက် ဓာတ်ပုံတွေထဲကလိုကို အပြင်မှာ အရှင်လတ်လတ် အဲ အကောင်အထည်လိုက် ကားမျိုးစုံ တွေ့ရတော့မှာမို့ အိုဗျာ ရင်တွေတောင် တုန်မိသေး။
ပုံ (၃) မျှော်လင့်ထားတာက ဒီလို (Credit to: myanmarcelebrity.com)
တွေးထားတာက အသစ် အဟောင်း brand အစုံ၊ ဈေးနှုန်းတွေ ရှေ့မှန်မှာ ပြူးနေအောင် ကပ်ထားပြီး ဒီမော်ဒယ်က ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါကဘယ်လောက်ရှိကြောင်း စသဖြင့် အရောင်းသမားတွေက ရှင်းပြလို့၊ brand model အလှလေးတွေကလည်း အစ်ကိုရဲ့ မောင်ရဲ့ ဒါလေးရွေးလိုက်ပါလား၊ ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲနေ့မို့ ဒစ်စ်ကောင့်လဲ ပိုပေးထားတယ်ရယ်လို့ မကြည့်ကြည့်ချင် အဲ..မ၀ယ်ဝယ်ချင်အောင် ဆွယ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။
တကယ်တမ်းက ကားကုမ္ပဏီ သုံးလေးခုလားပဲရှိတယ်..။ Lan Lan ဆိုင်ကယ်ပြခန်းက တစ်ခန်း။ မျက်စိထဲတိုးတဲ့ ကားလည်း တွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကပ်မထား၊ သွားမေးရမှာလည်း မရဲ၊ အဓိက ကလေးတွေဆိုတာလည်း ဘယ်နားနေမှန်းမသိ.. အရောင်းသမားတွေပြောပါတယ်။ Security ဆိုတဲ့ စာတမ်းပါ အင်္ကျီဝတ်ဦးလေးကြီးပဲ ငုတ်တုတ် ထိုင်စောင့်နေသေး။ ဘယ်သူက မ ပြေးမှာကျလို့။ လေပါတယ်ဗျာ။
ပုံ (၅) ပြပွဲက တချို့ကားတွေ
အဲဒါနဲ့ ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် (အူးကြီးမိုက်နဲ့ အူးကြောင်ကြီးကို ပြောတာမဟုတ်) လျှောက်ကြည့်ပြီး အလန်းဇယားလေးတွေ တွေ့တဲ့နား မယောင်မလည်သွားတော့ Kixx အင်ဂျင်ဝိုင်အရောင်းပြခန်းတဲ့။ ၀ယ်တဲ့လူ ကံစမ်းမဲ တစ်စောင်ရမယ်.. ဆိုင်ကယ် သုံးစီး မဲဖောက်မှာဆိုတာနဲ့ တစ်လီတာဘူးတစ်ဘူး ၀ယ်ပြီး ကံစမ်းခဲ့ပါရောဗျို့..။
ပုံ (၆) မဲဖောက်မယ့်ဆိုင်ကယ်တွေ (မှောင်နေတာကို ပြူးမကြည့်ကြပါနဲ့ ရွာသားတို့ )
ကဲဗျာ မရှိတော့လည်း ရှိတဲ့ အလန်းဇယားလေးတွေပဲ လက်ဆော့ခဲ့ရတာပေါ့ (လေးပေါက်စကား)
ပုံ (၇) ပိုစတာကို ရိုက်လာတာနော်
ကားအရောင်းပြခန်းတွေက ထင်သလောက် မဟန်ခဲ့တော့ အင်ဂျင်ဝိုင်ဘူးလေးဆွဲပြီး ဈေးဆိုင်တန်းတွေဘက် လှည့်ခဲ့တယ်…။ အဲဒီမှာ ပိုဆိုးတော့တာပဲ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်လောက်၊ ဟန်းဆက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်လောက်၊ ရွှေဆိုင်က တစ်ဆိုင်လား ပဲ။ Solar system တစ်ဆိုင်၊ မီးသတ်ဆေးဗူးဆိုင်၊ ဆေး၊ အချိုရည် ကော်ဖီမစ်ဆိုင်ခန်းနဲ့ ရေသန့်စက်ဆိုင်ရှိမယ်။ အိမ်သုံးပစ္စည်းဆိုင်၊ တရုတ်က သံလိုက်တဲ့ စတီးပစ္စည်းဆိုင်တချုိ့နဲ့ ကျန်တာ ဘုရားပွဲက အ၀တ်အစားဆိုင်၊ အရုပ်ဆိုင်လိုမျိုးတွေနဲ့ ဘေထုတ်ဆိုင်တွေပဲ များတယ်။ ဘုရားပွဲလို မုန့်ဆိုင်တွေလည်း အများကြီးနဲ့ ရဟတ်တစ်ခု၊ လေမှုတ်ကစားကွင်းကြီး တစ်ခုနဲ့ 3D ရုပ်ရှင်ဆိုတာလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။
ပုံ(၈) ဆော့ကြမယ် ခုန်ကြမယ်
ဘုရားပွဲ ဈေးသာသာဖြစ်နေတဲ့ နေပြည်တော် ဈေးပွဲတော်နှင့် ကားပြပွဲကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တာကြောင့် ငါးမရလည်း ရေချိုးပြန်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသကာလ ကားဝယ်ဖြစ်ရင်သုံးဖို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး သော့ချိတ်တစ်ခုကိုပဲ ငါးရာပေး၍ ထပ်မံ ၀ယ်ကာ ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ကဲ.. ရွာစားကျော်တဲ့ကွ.. တစ်ကျော်တည်းရှိတယ်။ မကျော်ဘူးဆို ရေလုံပြုပ်ပစ်မယ်။ :harr:
ပုံ (၉) Solar-powered Key chain
တော်သေးတယ် မလိုက် ဖြစ်လို့ …… anyway ကျေးကျေး ပါ အစ်ကို ရေ ……. တစ်ရက်တော့ အေးဆေး တွေ့ချင်သားဗျာ ..
ဗြုန်းဆို စိတ်ထဲပေါ်လာတာတော့ ရန်ကုန်သား ဆိုတော့ ကြေးအိုးကြိုက်မှာပေါ့
YKKO က ကြေးအိုး လိုက်ကျွေးမယ်လို့..
မင်းနန္ဓာ တစ်ယောက် မှန်းချက် (ပုံ၃) နဲ့ နှမ်းထွက် (ပုံ၎) မကိုက်ပုံများးးးးးးးး
ဖတ်ရတဲ့လူကိုတောင် ခံစားချက်ကူးသွားအောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ်။ :harr:
မင်းနန္ဓာ လို့ ရေးတာ ဓ နဲ့ ဒ တမင်ရေးထားတာလား။
တမင်ရေးထားတာ ဆိုရင်လဲ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိချင်လို့။
စပ်စပ်စုစု စပ်စုတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။
သဂျီးဆီက CJ လက်မှတ်တောင်းလို့ရအောင် ……..
သတင်းထောက်လို မေးခွန်းမေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်နေလို့။
ညဘက်မှာတော့ ရဟတ်လာစီးတဲ့သူ၊ မုန့်လင်မယားလာစားတဲ့သူ၊ လေမှုတ်ကစားကွင်မှာ ကစားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ တော်တော်စည်တယ်တဲ့ဗျ
ကော်ပီရိုက်နဲ့ တိုက်ရိုက်ငြိမှာစိုးလို့ ဓ နဲ့ သက်သက် ဓာ ထားတာပါ..
မင်းဏန္ဓာ လို့ ထပ်ပြောင်းမလားလို့ .. နောက်ပြီး အလွယ်ခေါ်တဲ့အခါ နံဒါ နံဒါ ဖြစ်သွားတတ်လို့…
ကျနော်လည်း ဘော်ဒါတွေ ဘာကြိုက်မှန်း သေချာမသိတော့ စိတ်ထဲဖျက်ခနဲ ပေါ်လာတဲ့ဟာ လိုက်ကျွေး ပြုစုမယ်ပြောလိုက်တာ
ကဲ.. နေပြည်တော်လာရင် ဘာနဲ့ ဧည့်ခံပြုစုစေချင်လည်း ပြောကြပါ….
ကြေးအိုးလဲ ကြိုက်ပါ့ဗျို့  …. တရုတ်စာ အကုန်ကြိုက်တယ် :-) နေပြည်တော် လာစရာ ရှိသေးတယ် အစ်ကို ရ ..ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ် .. အမှန်ကတော့ နေပြည်တော် အလွန် ပန်းတင် ကို သွားရမှာ …
ရွာစားကျော် ရေးထားတာ ဖတ်ရတာတော့ ၊
အဓိက လေးတွေ မတွေ့ခဲ့ရလို့ တင်းနေပုံပါပဲ ( ကား ပြောတာခမျ ) ၊
ဆော့ကြမယ် ခုန်ကြမယ် / လေမှုတ်ကစားကွင်းကြီး ကို ၊
ကျနော်တို့ဆီမတော့ Jumping Castle ခေါ်ကြသဗျ ။
အဓိက က.. အဲ အဓိကပါပဲဗျာ… (ကားပြောပါတယ်)
အဲဒီ လေမှုတ်ကစားကွင်းမှာ ကလေးတွေ အစောင့်ကောင်လေးကို ဂျီကျနေတာတွေ့ခဲ့တယ်
အလကား ပေးမဆော့လို့တဲ့.. ရဟတ်ကလူကြီးတွေက အလကားပေးစီးတယ်တဲ့ ပြောနေလေရဲ့
မရတဲ့အဆုံး ပုံထဲကအတိုင်း ဘေးဘောင်ပေါ် ဟေး ဆိုပြီး ခုန်တတ်လိုက်ကြ
အစောင့်ကောင်လေးလာအော်တော့ ပြေးဆင်းသွားကြနဲ့ ဟုတ်လို့..
အူးလေး ပိုက်ဆံတွေ တော်တော်ကုန်သွားမှာဘဲ ဘာလို့အများကြီး ၀ယ်လာတာလဲ :harr:
ကားသော့ ချိတ်ဖို့ သော့ချိတ် အရင်ဝယ်လာတာပေါ့နော်…
အဟီး ….. ဖြေးဖြေးချင်းစုနေတာပေါ့လေ :harr:
ကားနဲ့ဆိုင်တာနှစ်ခုကြီးများတောင်ဝယ်လို့ရခဲ့တာဘဲ (အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ သော့ချိတ်)၊ ကျေနပ်လိုက်ပါ
@ ဗုံဗုံနဲ့ မအိရေ
ကျနော် ပြောခဲ့ပါသကော.. ငါးမရလို့ ရေချိုးပြန်ခဲ့ ပါတယ်လို့
@ minnannawar ရေ
မကျေနပ်နိုင်ဘူးဗျာ .. အဓိကမှ အဓိမကခဲ့ရတာ
ပုံ ၃ နှင့် ပုံ ၇ ကိုသာ ကူးယူထားလိုက် ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
.. ဒီပုံလေးလောက်ကို ကူးမနေပါနဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ သွား ဂလုလေ..
တားတားက အဲ့ဂျာမျိုးဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေတိဘူးရယ်
ပုံ၇ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ နောက်တခါရိုက်ရင် အတွင်းခံ မပေါ်စေနဲ့လို့.. အခုတော့ ဟတ်ကော့ ဖီလင်ဂျီး…
ကိုမင်းနန္ဓာ ရေ မနေ့ က နေပြည်တော် ကားပြပွဲကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲထဲက ရဟတ်သွားစီးတာ အတူစီးမယ့် လူလည်း မရှိတော့ ရဟတ်ယာဉ် ဟိုဘက်ခြမ်းက အတွဲတစ်တွဲနဲ့ ၃ယောက်ပဲ စီးခဲ့ရတယ်။ အဆင်းမှာ ၃ယောက်ဆိုတော့ ၀ိတ်မညီလို့ ရဟတ်တွဲ ပြုတ်ကျမလို ဖြစ်သွားတယ်။ ရဟတ်စီးတာထက် ပိုကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ မနေ့ ညက ခေါင်းမူးပြီး အိပ်လို့ တော့ ကောင်းသွားပါတယ်။
လူဇိုး.. အိမ်က ရှာရာပိုကြောင်လေးကိုပဲ အတွင်းခံမစွပ်ဘဲ ရိုက် ကြည့်ပေါ့..
ကံကြီးပေလို့သာပေါ့.. မဟုတ်ရင် ၁၂၁၂၁၂ အမှတ်တရ ထိပ်ပေါက်ပြီး ပတ်တီးလေးနဲ့ ဖြစ်နေမှာ
ခုလောလောဆယ်တော့ မ၀ယ်နိုင်သေးပါဘူး … ဒါကြောင့် ကားတွေရော … လူတွေရော စိတ်မ၀င်စားသေး ဘူး ….. ကလေးကစားတဲ့နေရာတော့ စိတ်ဝင်စားတယ် ……
ကားပြပွဲတွေမှာ.. ဘာကြောင့်.. လူမိုဒယ်မမတွေသုံးကြသလည်းရဲ့.. အဖြေတခုပါပဲ..
ကိုရင်ပွဲက.. အိပ်စပိုသာဆိုတယ်.. ကားအရောင်းကွင်းကျနေတာပဲ…
ကျုပ်တို့ ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲကြော်ငြာလာထည့်ထားတဲ့.. မြန်မာ၂ယောက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်နေတဲ့.. Longo Toyota ကားဝင်းပုံတင်ပေးလိုက်တယ်..
မင်္ဂလာပါ သူကြီးမင်းခင်ဗျာ တစ်ခုလောက်မသိလို့မေးပါရစေ
ယခုလို ကွန်မန်း ထဲကို ဓာတ်ပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
မည်သို့ မည်ပုံ ထည့်နိုင်ပါကြောင်းလေး . . . . . . .
၄ စတား ဂျင်နရယ် ဖြစ်အောင် အရင်လုပ်
ပြီးရင် အဲလို ပုံတွေ ထည့်လို့ရစေရမယ်နော်.. ဟဲ ဟဲ (လောလောဆယ် ရွာထဲက မထွက်နိုင်အောင် ချုပ်ထားလိုက်အုံးမယ်)
လူတိုင်း ထည့်လို့မရပါဘူး.. ကွန်မင့်တိုင်း အဲလိုသာဆို သူကြီး ဆာဗာ မနိုင်ဘဲဖြစ်သွားမယ်လေ.
ကိုယ့်ကလေးကို အဲ့ ကွင်းထဲ သွားကစားခိုင်းရမှာလည်း စိတ်မချပါဘူး။ နည်းနည်းကြီးတဲ့ ကလေးတွေက တအား ရမ်းသမ်း ဆော့နေတော့တာပဲ.. မတော် နင်းမိ ခိုက်မိမှာ စိုးရတယ်..
ကျနော်ဆို ခုထိ လိုတိုတိုကြီး ဖြစ်နေတုန်းပဲ..
ဈေးပွဲတန်းကတော့ ဆိုင်တွေ အတော်များပါတယ်.. ဘေဆိုင်တွေပေါလို့ စိတ်ညစ်တာနဲ့ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ခဲ့တော့တာ
ပြောသာပြောရ နေပြည်တော်က ၀န်ထမ်းတွေချည်းများပြီးတော့ ဧရိယာက လူဦးရေအရ ကျယ်လွန်း၊ သွားလာရေးမလွယ်တာတွေကြောင့် ထင်ပါရဲ့
ဒေသခံတွေ ဆိုတာလည်း လက်လုပ်လက်စားများတော့ ကားပွဲထက် ဈေးတန်းဘက် လည်တာများတယ်
ညဘက်တော့ အေးဆေးရှိလို့ လူများမလား မဆိုနိုင်ဘူး..
ကားကုမ္ပဏီတွေဘက်ကကြည့်တော့လည်း သယ်ခပိုးခ၊ ဆိုင်ခန်းခနဲ့ ၀ယ်လိုအား ချင့်ချိန်ပြီး အားသိပ်မထည့်ဘဲ လုပ်ကြတယ်ထင်ပါတယ်
ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံရင် ဒေသအစားအစာကို ဧည့်ခံတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိတယ်။
ရန်ကုန်သား ကြေးအိုးကြိုက်ပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ အချိန်မရွေးဝယ်စားလို့ရတယ်။
နေပြည်တော်က အစားအစာကတော့ အဲဒီရောက်တုန်းသာ စားနိုင်တာမို့ ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကိုယ်ရောက်ရင် စားရအောင်လို့ ကိုယ်စားချင်တာ ကိုယ်ပြောသွားတာ။
နေပြည်တော် .. ရဲ့ ဒေသ အစားအစာ က ဘာလဲဗျို့  … အရင်ကကြားတာတော့ .. တောဝက်ဆိုလား .. တောကောင် ဆိုလား . . . . . .။
နေပြည်ဒေါ်မှာ စစ်ဗိုလ်သား အကောင်းဆုံးပဲ။ အကောင်ကြီးလေ ဈေးပိုပေးရလေ… ရရင် တီးသာတီး…။ ဒိုင်းညှောင့်… :harr:
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားက နာမည်ကြီးတာတော့ ၀ါးပိုးမျှစ်ချဉ်ပဲ
ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ဖြစ်အောင် ဆက်လေ..
ဒေသစာ မျစ်ချဉ်နဲ့ တောဝက်သား ချက်ကျွေးမယ်.. :hee:
စစ်ဗိုလ်သားတော့ ကြားရတာနဲ့တင် ခါးလွန်းလို့
ကိုရွာစားကျော်ရေ… ပျဉ်းမနားမျစ်ချဉ်နာမည်ကြီးပေမဲ့ သိပ်မကြိုက်ဘူး..ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်းတုန်းက မန်းလေးကပြန်လာတော့ နေပြည်တော်ခဏ၀င်လည်ဖြစ်တယ်။ အိမ်ခဏ၀င်ကြည့်ပြီး ထမင်းဝင်စားတာပါ.. မောခမ်းနွံက နှစ်တရာပဲနဲ့ ပဲရွက်သုတ်ကိုတော့မမေ့ဘူး..သူတို့ဆိုင်က နေ့လည်ပိုင်းလူကျပ်လွန်းတာကလွဲပြီး အရသာလေးကမဆိုးဘူးနော်..
အခုလို သက်ရှည်ကျန်းမာဆေးလေးတွေပြပေးလို့ရှဲရှဲပါဗျား
မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူကို လျှာလည်သွားအောင် ချက်ကျွေးရမလား.. အိမ်ခဏ၀င်လည်တယ်ဆိုတော့ ခရစ်စတယ်က ပျဉ်းမနားသူလားဟင်
တနေ့မှ ၁၀မိနစ်ထဲနော်.. အဲဒီဆေးက